Soosaarayaasha Alaabooyinka |Alaabta Shiinaha & Warshada
Qiimaha Warshada STELLE Iibka Cusub ee Diode Laser Cirib timaha Timaha ND YAG Q-SWITCH Laser 1064nm 532nm 755nm Mishiinka Ka Saarida Tattoo
Mashiinka quruxda badan ee shaqeynaya diode laser + iyo yag laser 2 in 1.
1 mashiinka oo leh 2 gacan, daboolaya 4 hawlood.
Gacan 1: Diode Laser ee timaha ka saarista iyo soo kicinta maqaarka
Gacan 2: ND Yag LaserKa saarista tattoo iyo daawaynta diirinta kaarboonka.
CE waxay ogolaatay 3 in 1 mashiinka quruxda badan ee IPL+RF+Nd Yag+dioden 808 alexandrite diode laser timaha ka saarida
Kani waa Big Spot Diode laser + Nd Yag Laser + IPL 3 gudaha 1 mashiinka.
Waxay leedahay saddex gacan oo kala ah: 2nd generation diode laser handle + Nd yag laser handle + IPL gacanta.
Functions: saarista laser timaha, saarista tattoo, daawaynta midabaynta, kaarboonka diirka, IPL SHR timaha ka saarida super, maqaarka caddeeya, sawir cusboonaysiinta, daaweynta finanka.
Saddex Nidaam oo si madaxbanaan u shaqeeya
qiimaha warshadda 3 in 1 ipl elos laser diode laser 808 nm seddexle mawjad diode laser mashiinka timaha saarista walaal midabka leysarka ani iyo alex q bedelay nd yag laser elos iplmultifunction qurxinta mashiinka qurxinta ee salon spa
Kani waa Diode Laser joogto ah + Nd Yag Laser + IPL 3 gudaha 1 mishiin.
Waxay leedahay saddex gacan: gacan-ku-haynta laser diode Classical, gacanta IPL, iyo gacanta Nd Yag Laser.
Hawlaha: Diode laser timaha saarista, IPL maqaarka caddeeya, IPL sawir cusboonaysiinta, IPL SHR super timaha saarista, IPL finan daawaynta, Nd Yag Laser tattoo saarista, Nd yag laser diirinta carbon, iyo Nd yag laser midabaynta.